Ebram napụtara Lọt (1-16)
Melkizedek gọziri Ebram (17-24)
14 N’oge ahụ, Amrafel eze Shaịna,+ Arịọk eze Elesa, Kedọlaoma+ eze Ịlam,+ na Taịdal eze Goyim 2 lusoro Bira eze Sọdọm,+ Biasha eze Gọmọra,+ Shaịnab eze Adma, Shemiba eze Zeboyim,+ na eze Bila, ya bụ, Zoa, agha. 3 Ndị a niile kpọkọtara ndị agha ha na Ndagwurugwu Sidim,+ ya bụ, Oké Osimiri Nnu.+ 4 Kedọlaoma achịala ha afọ iri na abụọ, ma ha nupụrụ isi n’afọ nke iri na atọ. 5 N’afọ nke iri na anọ, Kedọlaoma na ndị eze ya na ha so bịara agha ma merie ndị Refeyim nọ n’Ashterọt-kaneyim, ndị Zuzim nọ na Ham, nakwa ndị Imim+ nọ na Sheve-kiriateyim, 6 Ha merikwara ndị Horaịt+ nọ n’ugwu ha bụ́ Sia.+ Ha meriri ha ruo El-peran, nke dị n’ala ịkpa. 7 Ha wee tụgharịa bịa En-mishpat, ya bụ, Kedesh,+ ma merie ógbè ndị Amalek+ niile, meriekwa ndị Amọraịt+ bi na Hazazọn-tema.+ 8 Mgbe ahụ, eze Sọdọm gawara agha, ya na eze Gọmọra, eze Adma, eze Zeboyim, na eze Bila, ya bụ, Zoa. Ha haziri onwe ha na Ndagwurugwu Sidim ka ha lụọ agha, 9 ka ha lụso Kedọlaoma eze Ịlam agha, ya na Taịdal eze Goyim, Amrafel eze Shaịna, na Arịọk eze Elesa.+ Eze anọ na-alụso eze ise agha. 10 Olulu bitumen juru na Ndagwurugwu Sidim. Eze Sọdọm na eze Gọmọra wee chọọ ka ha gbalaga, ma ha dabara n’ime olulu ndị ahụ. Ndị fọrọ n’ime ha gbagara n’ebe bụ́ ugwu ugwu. 11 Ndị meriri n’agha ahụ wee bukọrọ ngwongwo ndị Sọdọm na Gọmọra niile, bukọrọkwa nri ha niile lawa.+ 12 Ha kpụkwaara Lọt nwa nwanne Ebram, onye bi na Sọdọm,+ bukọrọkwa ngwongwo ya lawa. 13 Mgbe e mechara, otu nwoke nke si n’ebe ahụ a lụrụ agha gbapụ bịara kọọrọ Ebram, onye Hibru, ihe merenụ. N’oge ahụ, Ebram bi* n’akụkụ ebe Mamri, onye Amọraịt,+ nwere nnukwu osisi dị iche iche. Mamri bụ nwanne Eshkọl na Ena.+ Ụmụ nwoke ndị a na Ebram kwekọrịtara na ha ga na-enyere ibe ha aka. 14 Otú a ka Ebram si nụ na a dọrọla onye ikwu* ya+ n’agha. O wee kpọkọta narị ndị ohu atọ na iri na asatọ (318) a mụrụ n’ụlọ ya, ya bụ, ụmụ nwoke a kụziiri otú e si alụ agha. Ha chụụrụ ndị agha ahụ gawa ruo Dan.+ 15 N’abalị, o kewara ndị agha ya, ya na ha wee lụso ndị ahụ agha ma merie ha. Ha chụụrụ ha ruo Hoba, nke dị n’ebe ugwu Damaskọs. 16 Ọ napụtara ha ngwongwo niile ha bụkọọrọ, napụtakwa Lọt onye ikwu ya na ngwongwo ya niile nakwa ụmụ nwaanyị na ndị ọzọ. 17 Mgbe Ebram merichara Kedọlaoma na ndị eze ya na ha so ma lọta, eze Sọdọm gara ka o zute Ebram na Ndagwurugwu Sheve, ya bụ, Ndagwurugwu Eze.+ 18 Melkizedek+ eze Selem,+ onye bụ́kwa onye nchụàjà Chineke Onye Kacha Elu,+ gakwara ka o zute Ebram. O nyere Ebram achịcha na mmanya. 19 O wee gọzie Ebram, sị: “Ka Chineke, Onye Kacha Elu,Onye kere eluigwe na ụwa, gọzie Ebram. 20 Ka otuto dịrị Chineke Onye Kacha Elu,Onye nyefere ndị iro gị n’aka gị!” Ebram wee nye ya otu ụzọ n’ụzọ iri n’ihe niile ọ kwatara n’agha.+ 21 Mgbe e mechara, eze Sọdọm sịrị Ebram: “Kpọnye m ndị obodo m ma buru ngwongwo.” 22 Ma Ebram gwara eze Sọdọm, sị: “M weliri aka m na-aṅụ iyi n’ihu Jehova Chineke, Onye Kacha Elu, Onye kere eluigwe na ụwa, 23 na agaghị m ewere ihe ọ bụla bụ́ nke gị. Agaghịdị m ewere eri ma ọ bụ eriri akpụkpọ ụkwụ, ka ị ghara ịsị, ‘Ọ bụ m mere ka Ebram baa ọgaranya.’ 24 Agaghị m ewere ihe ọ bụla ọzọ ma e wepụ ihe ụmụ okorobịa a riri. Ma ka Ena, Eshkọl, na Mamri,+ bụ́ ụmụ nwoke ndị so m gaa agha, were òkè ha.”
^ Ma ọ bụ “bi n’ụlọikwuu.”